Faah faahin: Weerar ka dhacay Duleedka Kismaayo – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAFaah faahin: Weerar ka dhacay Duleedka Kismaayo
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ku bilowday Qarax oo ka dhacay degaanka Buulo-guduud oo ku yaalla duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Dadka degaanka ayaa inoo sheegay in weerarkan lala begsaday Ciidamo ka tirsan Maamulka Jubbaland, kuwa Midowga Afrika ee AMISOM iyo Ciidamo cadaan ah, kuwaasi oo halkaasi ku socdaalayay.
Wararka laga helayo degaanka ayaa waxa ay sheegayaan in Kolonyadan lala eegtay Qarax Miino oo lagu aasay wadada, kadibna halkaasi uu dagaal kooban ku dhexmaray Ciidamada weerarka lala eegtay iyo xoogag ka tirsan Shabaab, ilaa hadda si dhab ah looma oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay.
Website-yada Shabaab ayaa lagu baahiyay weerarkan in ay geysteen xoogag ka tirsan Shabaab, kadibna halkaasi labada dhinac uu ku dhexmaray iska hor imaad kooban, Shabaab waxa ay sheegteen in ay khasaare gaarsiiyeen Kolonyada.
Ciidamadan ayaa ka soo baxay magaalada Kismaayo, waxayna ku sii jeedeen degaano duleedka ka ah Kismaayo, balse inta aysan gaarin ayaa weerarka uu qabsaday, Saraakiisha laamaha ammaanka Jubbaland weli ma aysan faah faahin.
Xoogaga Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada nuucaan oo kale ah u dhiga Ciidamada Jubbaland iyo kuwa AMISOM ee dhaq dhaqaaqyada Millitari ka wada duleedyada Magaalada Kismaayo.
44,893 total views, 1,843 views today
44,893 total views, 1,843 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
44,964 total views, 1,842 views today
44,964 total views, 1,842 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
44,977 total views, 1,841 views today
44,977 total views, 1,841 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
44,999 total views, 1,841 views today
44,999 total views, 1,841 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,034 total views, 1,843 views today
45,034 total views, 1,843 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]